‘रुख’को साख क-कसले जोगाउँदैछन्? - BBC News नेपाली
‘रुख’को साख क-कसले जोगाउँदैछन्?
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको वाम गठबन्धनले धेरै ठाउँमा जित्दै गर्दा कतिपय कांग्रेसका नेताहरुले भने आफ्नो सीट या सुरक्षित पारिसके या त उनीहरु जिततर्फ उन्मुख छन्।
(स्रोत: निर्वाचन आयोग, आइतबार २ बजेसम्मको मतपरिणाम बमोजिम)
नेपाली कांग्रेसले धेरैतिर हार बेहोरिरहे पनि पार्टीका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने आफ्नो गृहजिल्ला डडेल्धुराबाट फेरि जित हात पार्न लागेको देखिन्छ। विक्रम सम्वत २०४८ देखि नै उनले सो क्षेत्रबाट लगातार चुनाव जित्दै आएका छन्। यसपटक उनी माओवादी केन्द्रका खगराज भट्टभन्दा करिब सात हजार मतले अगाडि छन्।
शशांक कोइराला, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) १
पार्टी महामन्त्री कोइराला माओवादी केन्द्रका भविसोर पराजुलीभन्दा झण्डै पाँच हजार मतले अगाडि रहेका छन्।
प्रकाशमान सिंह, काठमाण्डू १
विगतदेखि जित्दै आएको काठमाण्डू १ मा प्रकाशमान सिंह पुन: विजयी भएका छन्। उनको यसपटक विवेकशील साझा पार्टीका रवीन्द्र मिश्रसँग निकै कडा प्रतिस्पर्धा भएको थियो।
गगन थापा, काठमाण्डू ४
नेकपा एमालेका युवा नेता राजन भट्टराईलाई करिब ३ हजार मत अन्तरका साथ गगन थापाले पराजित गरिदिएका छन्। जितपश्चात उनले बीबीसीसँग कुरा गर्दै पार्टीभित्र हारको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने र विशेष महाधिवेशन गरिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
Image caption रिजालले यसपटक पहिलोचोटि प्रत्यक्ष चुनाव लडेका हुन्।
मिनेन्द्र रिजाल, मोरङ २
पहिलो पटक प्रत्यक्ष चुनावी मैदानमा उत्रिएका मिनेन्द्र रिजालले ३५,८१९ मतका साथ नेकपा एमालेका ऋषिकेश पोखरेललाई करिब दुई हजार मतले हराएका छन्।
भीमसेनदास प्रधान, काठमाण्डू ६
रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले पहिलो संविधानसभाको चुनावमा नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाललाई पराजित गरेर चर्चित बनेका माओवादी केन्द्रका झक्कुप्रसाद सुवेदीलाई हराइदिएका छन्।
राजेन्द्रकुमार केसी, काठमाण्डू १०
दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई हराएका केसीले यस पटक माओवादी कै हितमान शाक्यलाई पराजित गरेका छन्। उनले दुई हजारभन्दा केही बढी मतले प्रतिद्वन्द्वीलाई पछि पारेका छन्।
मोहम्मद आफताब आलम, रौतहट २
मोहम्मद आफताब आलमले आफ्नो गृहजिल्लामा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका किरणकुमार साहलाई करिब दुई हजार मतको अन्तरले जितेका छन्।
कडा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका अन्य कांग्रेसी नेताहरु: ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, नारायण खड्का तथा प्रदिप गिरी थोरै मतले अगाडि छन्। त्यस्तै बर्दियाको क्षेत्र नम्बर १ मा कांग्रेसका सञ्जयकुमार गौतमले वर्तमान वाम गठबन्धनका एकजना सूत्रधार तथा एमालेका नेता वामदेव गौतमलाई केही मतले पछि पारिरहेका छन्।